Izinzuzo zamafutha we-sesame izinwele nezinwele - Afrikhepri Fondation
ngoLwesine, mashi 4, 2021
Welcome UKUPHAKATHI NOKUBHALA
Izinzuzo zamafutha esesame ezinwele nasesikhunjeni
Funda: 5 imiz
Lesi sitshalo se-tropical oleaginous herbaceous isinye sezitshalo ezindala kunazo zonke (ekuqaleni kuka-2500 BC eMesopotamia, eSyria nasePalestine).
Namuhla, i-sesame ihlanyelwa kakhulu eNdiya, eChina, eMelika Ephakathi nasePersian Gulf.
Izithelo zawo iyi-capsule equkethe imbewu engaphezu kwama-200 inye. Letinhlanyelo letincane kakhulu, letiyindingilizi, letivulwe taya tacalulwa tinemnyama, zibomvu noma zimhlophe ngelibala. Uma icindezelwe, le mbewu iveza uwoyela wemifino.
Okuqukethwe kwawo kawoyela kuzungeze ama-50 - 57%.
Kunamathuba amabili okuthola lo oyili:
imbewu yosiwe: uwoyela umnyama, iphunga linamandla
imbewu ayosiwe: uwoyela ucacile, awunaphunga
Leliyela liyasetshenziswa kakhulu ekuphekeni kwaseMpumalanga.
Ngokuyinhloko yakhiwe ngama-asidi angenamafutha: i-43% oleic acid ne-41% linoleic acid
I-C16: 0 8 - 11%
I-C16: 1 max 0,3%
I-C18: 0 4 - 6%
I-C18: 1 37 - 42%
C18: 2 w6 39 - 47%
I-C20: 0 max 1%
Ucebile kakhulu kuma-protein, ama-fibre, amavithamini (kufaka phakathi i-vitamin E: phakathi kwe-20 ne-50 mg ye-100 mg) nakwesawoti wamaminerali.
Iqukethe i-sesamolin ne-lecithin, ama-antioxidants amabili emvelo.
Ukuhlangana kwayo okuphezulu kwe-linoleic acid kusiza ukulwa nesifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme kanye ne-cholesterol embi.
Okuqukethwe kwayo kwe-vitamin E kunikeza izakhiwo eziphikisayo.
Uwoyela weSesame uqukethe i-lecithin eyisakhi esibalulekile sohlelo lwezinzwa nohlelo lwe-endocrine.
Izintandokazi nokusetshenziswa kwendabuko
Amafutha eSesame ayelikhambi lokuzikhethela e-Ayurveda. Yayisetshenziswa ekwakheni amakhambi alwa nezifo ezihlangene.
Kutholakale nasekudleni kwamaBabiloni kanye namaGaul. AmaShayina aqhamuka ngekhulu lesi-XNUMX BC, asebenzise imbewu yesame ekulweni nokulunywa yizinambuzane nokusha okuncane.
Ngenxa yama-acids ayo asemqoka avuselela izicubu zesikhumba, unomphumela omuhle esikhumbeni nasezinwele. Isebenza ngokuphumelelayo nokucasuka nokuma.
Isetshenziselwa ukubhucungwa komzimba, i-virgin sesame oil iqeda izinhlungu ezihlangene, i-sciatica, izinhlungu emuva.
Inempahla yokumunca imisebe ye-ultraviolet, yingakho isetshenziswa njengesengezo ekwakhiweni kwesikrini selanga. Isebenza ngokuphumelelayo ekucasukeni kwesikhumba (eczema, psoriasis, desquamation). Iphinde ithinte izinzipho nezinwele.
Ukusetshenziswa kukawoyela we-virgin sesame ukulwa nama-radicals wamahhala. Izakhi ezilwa ne-oxidant "sesamol" ne "sesaminol" ziyenza ibe uwoyela wokuhlela kabusha.
Ukusetshenziswa kwangaphandle: ukuphatha ukoma nokucasuka
Ukusetshenziswa kwangaphakathi: ukusiza ukulwa nengozi yesifo senhliziyo
It isetshenziselwa fry ngoba ithoxa kancane.
Amafutha eSesame asetshenziswa kakhulu ekudleni kwaseMpumalanga.
I-honeymoon ne-royal jelly ukuthuthukisa impilo yakho
Dala izimonyo zakho eziphilayo (PDF)
Buka i-Lincoln (i-2012)
IHippo Water Roller ukwenza lula imiphakathi yasemakhaya ukuthutha amanzi